साहुको ऋण तिर्न र परिवार पाल्न विदेश जान ठिक्क परेका बीरेन्द्रलाई एका बिहानै बसले सबै सपना उडायो (भिडियो) – live 60media
१९ फागुन, बाँके । हिजो मात्रै बाकेको कोहलपुरमा माइक्रोबस पुर्ब तिर र बुलेट बाइक पश्चिम तिर बाट आउदै गर्दा माइक्रोबसले ठ क्क र दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने अन्य दुई जना घाइते भएका थिए । भे १ ख २२३९ नम्बरको माइक्रोबसले भे १० प ५६१ नम्बरको मोटर साइकललाई मंगलबार कोहलपुर नगरपालिका-५ किरन नाला नजिक सडकमा ठ क्क र दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको थियो । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
मृत्यु हुनेमा कोहलपुर नगरपालिका-३ बस्ने २५ वर्षीय बीरेन्द्र शाही रहेका छन् । उनलाई घटना स्थलमा पहिला देख्ने छिमेकी बहिनिले भन्छिन म बिहान कलेज जान लागेको थिए उता पर तिर बाट केहि प ड्कि एको जस्तो आवाज आयो म सिधै घटनास्थल मा झरेर हेर्दा दाई सडक भन्दा तल हुनु हुदो रहेछ, मैले केहि देखिन मात्र अस्पताल लैजान सबै संग सहयोग माग्न थाले र उहालाई अस्पताल पु-याए । उनि भन्छिन माइक्रोबस गलत साईड मै थियो ।
माइक्रोबसको ठ क्क रबाट गम्भीर घाइते भएका उनको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही माइक्रोबसले ठ क्क र दिँदा एकजना साईकलयात्री र अर्का एकजना पैदलयात्री पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते दुवै जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
माइक्रोबस चालकलाई निन्त्रणमा लिएर प्रहरीले दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । माइक्रोबसले ठ क्क र दिए लगतै देख्ने स्थानीयवासीहरु के भन्छन ? घटना घटेको ठाउमा के देखियो हेर्नुहोस् स्थलगत भिडियो रिपोट :
← दाइले खोजिदिए बहिनीलाई ज्वाई , टिका सानुको बिहे पक्का (हेर्नुहोस भिडियो)
करोडौंको घर, सम्पति भएका दम्पतीलाई आफ्नै डा. छोराले सबै सम्पति हडपेर सडकमा पुर्‍याए पछि, आमा भन्छिन्–‘यस्तो छोरालाई जन्म दिने भगवानको पनि आँखा अन्धो हुनुपर्छ’ (भिडिओ) →